संघ/प्रदेश निर्वाचन: आयोगले किन रोज्यो दुई चरण?
मंसिरमा निर्वाचनका लागि दलहरू तयार भए पनि आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन किन चाहेन? किन ३१ जिल्ला मात्र मंसिर ४ भन्यो त?
सेतोपाटीको प्रश्नमा निर्वाचन आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहालले शंकालु नबन्न आग्रह गरे। साथै दुई चरण रोज्नुको दुई कारण दिए। दाहालले समयको चाप पहिलो कारण भएको बताए।
'दुई चरण गर्‍यो भने आयोगलाई मतदाता नामावली छाप्नका लागि समय हुन्छ। दोस्रो चरणको पनि छाप्न र व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ भनेर हो’, दाहालले भने, 'कुरो यत्ति हो। समय छोटो भयो। मंसिरमै गर्नुपर्ने अवस्था भयो।’ उनले दोस्रो कारण भने मौसमी अवस्था रहेको बताए।
'हिमाली र उच्च पहाडी जिल्ला मंसिरमा हिउँ पर्न सुरु गर्छ। त्यहाँ पहिला गर्ने तराईमा नपर्ने भएकाले ढिला गर्ने भनेको हो', दाहालले भने। ३१ जिल्ला रोज्नुको कारण पनि उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा हुनु बाहेक अन्य कारण नभएको दावी उनको थियो। आयोगले बिहिबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा मंसिर ४ गते ३१ जिल्लामा निर्वाचन गर्न सकिने बताएको थियो।
'हामीले प्रदेश भन्दा हावापानीलाई जोड दियौँ', दाहालले भने।
उनले स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रदेशमा एकसाथ गर्नपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको हकमा कुनै प्रतिबन्धात्मक अवस्था नरहेको उल्लेख गरे।
सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेर टुङ्गो छिटो नलगाए निर्वाचन मंसिरमा गर्न समय अभाव हुने दावी समेत उनले गरे।
'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन भदौ १५ गतेसम्म भनेका छौँ। १ सय ६५ क्षेत्र, अनि प्रदेशमा ३ सय ३० क्षेत्र बनाउनुपर्‍यो। नामावलीहरु त्यस अनुसार फाइलन गर्न अफ्ठेरो हुनसक्छ त्यसैले हतारिएका छौँ', दाहालले भने।
आयोगले एउटै मतपत्रबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन गर्न जटिलता हुने बताएको भए पनि दलहरुबीच दुई मतपत्र बनाउने समझदारीसँगै जटिलता अन्त्य भएको उनले बताए।
'कतै निर्वाचन आयोगका कर्मचारी र पदाधिकारीले भत्ता र आर्थिक फाइदा हेर्दै प्रदेश र संघको निर्वाचन त चाहेका थिएनन्' भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा दाहालले 'सोच अनुसारको ब्याख्या' भएको तर्क गरे।
'मान्छेको विभिन्न किसिमकको सोच र धारणा हुन्छ। सोही अनुसार ब्याख्या गर्ने हो। हामी अरुको मनमा पस्न सक्दैनौँ। चित्त बुझाउन सकिदैँन। निर्वाचन आयोगलाई सजिलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको निर्वाचन छुट्टा छुट्टै गर्दा हुन्थ्यो। गर्न सहज हुन्थ्यो। टेक्निकल्ली र प्राविधिक रुपमा सहज हुन्थ्यो,' दाहालले स्पष्टिकरण दिए।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र २, २०७४ १८:२९:३१